Hey’adda CISP oo soo dhaweysay Ansixinta Heshiiska Xuquuqda Carruurta
Tan iyo sannadii 1980-kii, Hey’adda CISP waxa ay la soo shaqeyneysay bulshada ku dhaqan Soomaaliya si ay kor ugu qaado wadiiqadii ay ku heli lahaayeen adeegyada aas-aasiga ah sida daryeel caafimaad, wax-barasho iyo fursadaha shaqo ee noolasha.
Inta xiligani lagu guda jiray, dadka Soomaaliyeed waxa ay u soo dulqaateen dhibaatooyin kaga imaanayey khilaafka siyaasadeed iyo gaajada. Iyadoo xaaladan ay jirto ayaa bulshada waxa ay muujiyeen niyo ayna xubno isugu qeybiyeen. CISP waxa ay sii waday ka go’naashiyaheeda ay ku taageereysay bulshadaan iyadoona u dejisay habab ay ku fududeyneyso arinkaan.
Sannadihii ugu dambeeyey, wadanka wax uu sameeyey tallaaboyinka badan oo wanaagsan; ansixinta heshiiska Xuquuqda Carruurta la saxiixay 20 Bisha Janaayo 2015 ayaa kamid ah waxyaabaha wanaagsan ee dalka uu ku tallaabsaday. CISP waxa ay soo dhaweysay hormarkaan xusida mudan kaa oo siin doono carruurta Soomaaliyeed xuquuq sharci ah kuna hagi doono siyaasado muhiim ah ee la xiriira Illaalintooda, waxbarashooda iyo daryeelkooda caafimaad.
CISP waxa ay natiijooyin wanaagsan u rajeyneysaa carruurta Soomaaliyeed sida: kororka ardayda dugsiyada dhigata, dhamaystirka iyo natiijo wanaagsan oo ku saabsan waxbarashada, caafimaad wanaagsan iyo heerka nafaqada; sidoo kale in la yareeyo xadgudubyada waaweyn ee ka dhanka ah carruurta oo ay ku jiraan askareynta carruurta oo kooxaha hubeysan lagu biirinayo, kala wadidda hooyada iyo dhallaankeeda.
Home Hey’adda CISP oo soo dhaweysay Ansixinta Heshiiska Xuquuqda Carruurta